Raha tsy hosasako … – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mars 10, 2012 mars 10, 2012 Laisser un commentaire sur Raha tsy hosasako …
K A R E M Y 2
RAHA TSY HOSASAKO HIANAO …
Ny zavatra maloto no tenenina hoe hosasana. Hoy Jesosy tamin’i Petera : « Raha tsy hosasako hianao, dia tsy manana anjara amiko » (Jaona 13:8b). Rehefa avy nanasa ny tongotry ny mpianatra sasany Jesosy, dia tonga teo amin’i Petera, ary nandà Petera tsy hosasan’i Jesosy ny tongony. Io no Teny navalin’i Jesosy an’i Petera, fa raha tsy hosasany izy dia tsy hanana anjara Aminy. Noheverin’i Petera fa manambany ny Tompony ny fanasany ny tongony, ka hoy izy taminy : « Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary, fa ny tanako sy ny lohako koa » (and. faha-9). Ny navalin’ny Tompo dia ny hoe : « Izay efa nandro tsy mila hosasana, afa-tsy ny tongotra ihany … » (and. faha-10). Marina tokoa raha ny ara- nofo no andraisana izany teny izany. Ary na ny ara-panahy aza dia mitombona ihany koa izany. Rehefa natao batisa ny olona iray, dia nandray ny fandroana masina, izay mitondra famonjena, sy fanadiovana ary famelana ny helony, izay nandraisany ny famelan-keloka tamin’ny nandatsahan’i Jesosy ny rany teo amin’ny Hazofijaliana.
Fandroana, fanadiovana nitondra fanavotana hoan’izay mandray izany fanadiovana izany. Rehefa avy nandray io fandroana masina io, rehefa avy nandray io fanadiovana nataon’ny Tompo io, dia mandray ny fananganan’anaka avy amin’Andriamanitra ka tonga zanany, ary voalaza fa mandova Azy, izany hoe zanaka mandova an’Andriamanitra isika izay nandray io fanadiovana io. (vakio Romana 8:17)
Ny ambaran’ny fanasan-tongotra ataon’i Jesosy eto anefa dia hafa no io, fanadiovana ihany fa karazany hafa. Raha mandinika, dia ny tongotra no faritra mora maloto indrindra amin’ny tenan’ny olombelona satria mifampikasoka amin’ny loto isan’andro, isaky ny mandeha ny olona. Raha dinihina izany eo amin’ny fiainam-panahintsika, na dia efa nodiovina aza isika, dia eo ny loto ifampikasoantsika isa-minitra. Na dia efa vita batisa aza isika, efa zanak’Andriamanitra, nefa mbola eto amin’izao tontolo izao ihany, mbola mifampikasoka amin’ny ota isa-minitra, dia mila ny fanasan-tongotra ataon’i Jesosy antsika; na dia eo aza izany fahotana izany dia tsy atao batisa intsony isika, fa miverina miaina izany batisa izany isan’andro, mila manaiky hosasan’i Jesosy tongotra isan’andro. Maro ireo fahotana malaky mahazo antsika, fa ireny dia vonoina amin’ny nenina sy ny fibebahana isan’andro. Ny firaisantsika amin’ny Tompo no manaisotra tsikelikely ireny eo amin’ny fiainantsika. Aoka isika tsy hiavonavon-kevitra, mety ho azon’ny fanetren-tena haitraitra ka tsy hanaiky hosasan’i Jesosy tongotra.
Fa raha manaiky ianao hosasan’i Jesosy ny tongotrao, dia ny lamba eny antsikinany mihitsy no hamaohany ny tongotrao avy nodioviny.
Mampiseho tokoa ny Fitiavana ao anatin’i Jesosy ireto mpianany izany.
Mampiseho ny Famelan-keloka izay zarain’ny Tompo ho an’ny mpianany izany, dia ireo izay manaiky hosasany sy hodioviny.
Na dia efa vita batisa aza ianao, dia mety misy zavatra izay nataonao nampanalavitra anao an’i Jesosy, ary mety zavatra maharikoriko mihitsy aza, ka na dia ianao aza dia mihevitra ny tenanao ho tena maloto. Meteza hosasany ianao. Maneke ny antsony ianao. Tia anao Izy.
Fa raha tsy hosasany ianao, dia tsy hanana anjara Aminy. Dieny mbola miantso Izy dia henoy ny antsony : ‘Avia hosasako ny tongotrao!’
Publié parfilazantsaramada mars 10, 2012 mars 10, 2012 Publié dansUncategorized